Mavericks at Work: ဘယ်သူငှားမလဲ။ | Martech Zone
Mavericks at Work: ဘယ်သူငှားမလဲ။
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 18, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်လက Indianapolis Marketing Book Club သည် Mavericks at Work ကိုစာအုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါစာအုပ်တွေကြိုက်တယ်, အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးစာအုပ်တွေကိုချစ်။ ငါ့အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏။ ငါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတာပဲ ဘယ်တော့မှတစ်ယောက်တည်းမစားနဲ့။ အောင်မြင်မှုအတွက်အခြားလျှို့ဝှက်ချက်များ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာဆက်ဆံရေးတစ်ခု.
Mavericks at Work သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ကောင်းသောစာအုပ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်ဖြည့်စွက်ထားခြင်းရှိမရှိမသေချာပါ။ Tom Peters, Guy Kawasaki, Seth Godin နှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကကျွန်ုပ်ကို Maverick ဟုအမြဲပြောကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Maverick ၏နှလုံးသားဖြစ်သော်လည်းကမ္ဘာကြီးသည်ဤမျှလောက်များပြားသောလိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်သည်ဟုမယုံကြည်ပါ။ ငါတို့လား
Maverickလွတ်လပ်သောရပ်တည်ချက်ကိုသူသို့မဟုတ်သူမနှင့်သူမများနှင့်မတူဘဲခြားနားသောဉာဏ်ပညာရှင်၊ အနုပညာရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်။
ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားများကိုပြုပြင်ရန်၊ ကြမ်းပြင်ကိုလှည်း၊ ဘတ်စ်ကားကိုစီး။ စတိုးဆိုင်ကိုကြည့်ရှုမည့်ယောက်ျားများကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ စီးပွားရေးတိုင်းသည် Mavericks ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အမှန်တကယ်တတ်နိုင်သလား။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသယမရှိတာ၊ Mavericks အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ကငါစာအုပ်ကိုဘယ်လိုကြိုက်သလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ ငါ "ငါစာအုပ်ကိုချစ်!" တုံ့ပြန်
ထိုအခါငါအလုပ်ပြန်သွားခဲ့ရသည်။ ငါ့အလုပ်ကငါ့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး ... ဒါဟာရိုးရိုးပါပဲ စီးပွားရေးတစ်ခုလုံး သေချာပေါက်အလုပ်မှာ maverick တန်ဖိုးထားမထားဘူး။ သူတို့သည်ပြင်ပမှလာသူများ၊ ပြmနာတက်သူများဖြစ်သည်။ မကြာခဏဆိုသလိုငါဟာ Maverick ပဲလို့ထင်ပြီးနောက်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနေသည်။
18:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 29 တွင်
လူတွေက သူတို့ဘာပဲလုပ်လုပ် အမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့ရပ်တည်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ “အဲဒါက သူတို့ပုံစံအတိုင်းပဲ” လို့ပဲ လုပ်နေတာတွေကို ရပ်လိုက်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနိုင်မယ် မထင်ဘူး၊ မေးခွန်းတွေမေးမယ့်အစား စပါးကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ရလဒ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင် ကမ္ဘာကြီးကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 26 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 10 နာရီ 14 မိနစ်
ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်၊ ဒါက ဆိုင်ကယ်တွေဆောက်တဲ့ Jessie James ရှိတယ်၊ Orange County Choppers ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေဆောက်တယ်။ ပြီးတော့ စာချုပ်ချုပ်မယ့်သူတွေ အကုန်လုံးက သူတို့အတွက် လုပ်တယ်။ ဒီလူတွေအားလုံးဟာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နေတယ်လို့ မင်းထင်သလား၊ ဘဝမှာ လုံခြုံစွာကစားပါ။ ဒါတွေက ဥပမာတွေပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ညီညွတ်ခြင်းမရှိသူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က အပ်စိုက်ကျောင်းတက်တဲ့ လူဖြူအမျိုးသမီး အမေရိကန်လူမျိုးပါ။3နှစ်ကြာခဲ့သည်။ ငါသည် အာရှသားမဟုတ်၊ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာ ညီညွတ်ခြင်း မရှိသူပါ။ လိုက်လျောညီထွေမရှိသူများ ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။
18:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 8, 28 တွင်
ငါသဘောမတူဘူး၊ ငါ့ကိုလမ်းမှားမခေါ်ဘူး၊ တခြားနည်းလမ်းထက် ပိုတန်ဖိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အသင်းတစ်သင်းမှာ 'lifters and pushers' လိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ထင်မြင်ယူဆသူများနှင့် ထိုစီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူများ။
စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် မရိုးမသားသောအမှုမည်မျှကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သနည်း၊ ယင်းတို့၌ အမှန်တကယ် ပြတ်တောက်မှုရှိမရှိကို ကျွန်ုပ်တွေးမိပါသည်။
18:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 30 တွင်
ကျွန်တော်လည်း ဒါကိုတွေးနေပေမယ့် - လူတိုင်းဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ Maverick ဖြစ်နိုင်သလို အခြားအချိန်တွေမှာ 'အလစ်ပေးသူနဲ့ တွန်းအားပေးသူ' (သူတို့ရဲ့လျှာကို ကိုက်ခိုင်းရင်တောင်) ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အရာရာတိုင်းကို နည်းလမ်းသစ်နဲ့ လုပ်ပါလို့ လူတိုင်းက အကြံပြုရင် မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အထူးသဖြင့် “ဘာကြောင့်လဲ” မေးလိုတဲ့မေးခွန်းတွေကို လူတိုင်းမေးဖို့ နေရာရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရတော့ ဒီမေးခွန်းကို မေးတာ အရမ်းရှားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 21, 2006 မှာ 10: 47 AM
ကျွန်တော်သဘောတူသည်။ စိတ်ကူးသစ်တွေ မက်ဖို့ တွန်းအားပေးမယ့် လူတွေရှိရမယ်။ အရေးကြီးတာက၊ ဦးတည်ချက်အသစ်ကို ရှေ့ကိုသယ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လူတွေကို လိုအပ်တယ်။
နှစ်ခုလုံးအတွက် အချိန်နှင့် နေရာတစ်ခုရှိသည်။ အကြံဉာဏ်သစ်များ ပေးဆောင်ခြင်းမပြုသောအခါတွင် ရပ်တန့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ သို့သော်၊ စိတ်ကူးများ အများအပြား ရောနှောပြီး အခြားသူ၏ စိတ်ကူးများကို မည်သူမျှ လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောအခါတွင် တုံ့ဆိုင်းသွားနိုင်သည်။